Gadaan Gadaa Qabsoo Qeerroo ti! | QEERROO
Gadaan kun kan kee ti. Gadaa kana keessatti kaatee yoo oromiyaa garbummaa jalaa hin baaftu ta’e, biyyaa fi saba garbummaan dhaale keessatti hireen darbuuf deema. Kun immoo qaanii qaanii caaluu dha. Abbootiin keenya garbummaa didanii guca bilisummaa qabsiisan har’as si waliin qabsootti jiru. Atis, guca isaan qabsiisan saniin biyyaa fi saba kee qarriffaa garbummaa jalaa baaftee gara bilisummaatti akka tarkaanfachiiftu sirraa eegu. Kana waan ta’eef, bakka jirtutti hidhannoo kee jabeeffadhu!
Akkuma beeknu, hidhaa fi ajjeechaan akkuma kaleessaa sanatti mana keetti dhufaa jira. Diinni keenya karaa maraan nu balleessee ofii badhaadhuuf nurratti hojjachaa jira. Nuti, qeerroon immoo yoo har’a didne malee biyyaa fi saba egere dhaallee dhalootaa dhalootatti lachiifnu qabaachuuf hin jirru. Kanaaf, bakka jirtitti waan dandeessu mara godhi!
Diinni keenya duula walii galaa nurratti bane jira. Ijoollee mana hidhaatti guuramaa jiran irraa akka hubannutti nu kanneen hafne illee buluu keenya beeknus, oollee keenya beekuuf hin jirru; ooluu keenya beeknus, buluu keenyaaf wabiin hin jiru. Wabiin keenya otuu falminuu du’a seena qabeessa du’uuf of-qopheessuu qofaa dha.
Odeeffannuun humnoota tikaafi basaasaa irraa nu gahaa jiru akka hubachiisutti manneen fi oolmaan sabboontota Oromoo marti hordofamaa jira. Torbee as dhufuuf jiru, keessaayyu, jimaata eegalee haga dilbataatti duulli guddaa manneen barnootaa keessatti banamuuf qophaa’ee jira. Kanaafis, humni guddaan waraanaa fi garee farra-shororkeessitotaa keessaa walitti qindeeffamanii jiru. Qeerroon kana beektee, akkuma kanaan duraatti of-eeggannoo guddaa akka gootu haata’u. Caasaa qabdan maraanis dhaamsa keessan akka miidiyaalee adda addaa gahu godha. Yoo diina harka buutan bifa kamiinuu gowwoomtanii akka odeessa keessan hin kennine.
Kaayyoon keenya kanneen abbaa irrummaan dhiiiga ummataa xuuxaa jiran dhabamsiisuu malee ummataa fi gosa kmirrattiyyuu kan xiyyeeaffattee miti. Nuti kan itti jirru, tooftaa diddaa keenyaan qabsoo keenya karaa nagaa itti fufuu dha. Hin dagatiinaa! Nuti saba kamirraayyuu diinummaa hin qabnu! Diinni keenya kanneen aangoo ummataan duruumanii dhiiga ummataa xuuxaa bara baraan jiraachuu fedhanii dha. Galiin keenya sirna cunqursaa dhabamsiisuu dha.
Qeerroo! Bifa kamiinuu sodaatti harka kennachuu hin qabdu! Otuu sodaannuu du’uun raawwatuu qaba. Yeroon du’aa jiraannus awwaalamuu qaba. Duuti sodaa illee dallaa keenya jala dhaabbatee jira. Qeerroonis gamtaa keetiin yeroon itti tulluu sodaa itti jijjigsitu ga’eeraa, ka’i!!
Qeerroo waanti guddaa ati gochuu maltu amala diina keetii beeki; jabinaa fi laafina diina keetii adda baasi. Diinni keenya waanti inni qabu meeshaa waraanaa malee dhugaa miti. Dhugaa kan qabu nu warra qe’ee keenya keessatti dararaa argaa jirruu dha. Dhuma irratti kan mo’atu, kan dhugaa qabuu dha. Abbootiin irree dhumaa isaanii hin argan; seenaa darbe irraa hin baran. Warreen seenaan galmeesse dhiifnee, warren kaleessaa yoo mil’anne kabajaa caalaa salphinaan aangoo irraa bu’uu warra filatanii dha. Haga fedhan kijibanis dallaan kijibaan ijaarratan du’a isaan hin oolchine. Dhugaaan karaa qal’aa keessaan hulluuqxee isaaniin fuutee darbite, bittaa wayyaanees buqqisuuf jirti; jabaadhu!!
9 thoughts on “Gadaan Gadaa Qabsoo Qeerroo ti!”
Abdi on April 14, 2011 at 5:42 am said:
Hag dhume dhumee kan hafeen bilisummaa dhalootaaf dabarsuu malee harka dhufaa darbaa gita bittuu habashootaatti rakkashuun hin jiru sichi. Nutis oromummaa keenya hojiin itti agarsiisuu qabna.Oduun gaddaa, boyyichaa fi kasasuu gara oduu injifannootti jijjiiramuu qabaa!!!!!!!!
Boonsaa Dhugumaa on April 17, 2011 at 11:54 am said:
Dargaggootni Oromoo fi Ummatni Oromoo haala salphinaa bara bittaa Woyyaanee kana saffisaan jjijjiiruuf dandeettii fi beekumsa akkasumas humna isaa gahaa qabu. Of irratti amantiin wareegama kamuu baasanii jijjirraa kana argamsiisuuf fuulduratti sochoúu qaban. Kan dagatamuu hin qabne jarraa 16ffaa keessa Oromoon haala sana dura itti roorifamaa ture of irraa dachaasee hanga Kaaba Itophiyaa kan sochoée wareegama baasuun malee laafaatti hin turre. Roorroo, hidhaa, saamichaa fi gadadoo waggaa 20 kan jijjiiruun dandámu wareegamaan tahuun Qeerroof ifaa dha. Kana sodaan salphatanii kana jala buluun gadi aantummaa fi hadoodinsa dha. Ammaan booda ammoo hadoodinsi fi gadi aantummaan itti fufuu hin qabuun murtii dha.
gololchaa on May 3, 2011 at 7:20 am said:
dhaamsi qabnu waan afaan jedhe hujitti hiikuun murteessa dhaamsi qeerroo dhaamsa akka dhaabbota siyaasaa kan afaaniin lallabanii hujiin hin jirre hin tahinaa
gololchaa on May 3, 2011 at 7:23 am said:
ammallee irraan deebi’a maqaa baqattoota oromoo jabuutiitin nuti dirqama lammummaa bahachuuf qophiidha garuu akka mitti wal amanna qaamni oromoo himatu hundinuu daldalaa tahanii jiru mee kana akka mitti laaltu ana Gololchaa boruu
Fincilaa on May 5, 2011 at 2:38 pm said:
Fincilaa on November 10, 2011 at 5:31 pm said:
Dagaagaa olaanaa Abraham on November 20, 2011 at 5:28 am said:
Odeeffannoo guutummaa guutuutti argattan hundumaa adaraa keessan addunyaa kanneen nudeggeran akkasumas kanneen akka mirgoota dhala namaaf dhaabbatan hundumaa biraan nuuf ga’uu hin dagatinaa!!barataa wallaggaa universitii irraa.galatoomaa baayyeen isin jaalladha.
Dagaagaa olaanaa on November 20, 2011 at 5:31 am said:
Jirbìin walgargaartee arba hiiti jedhu mitiiree abbootiin keenya kanaafuu tokkummaan keenya itti haa fufu.
Ilyaas on January 19, 2012 at 10:31 am said:
Abshir saba koo!Qeerroo yadanis ta’e humnanis, wanbarbachisu hundanu isin cina jira! INJIFANNON TAN UMMATA BAL’AATI!!!………….